पोखरा विमानस्थलको ४५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न, ६ महिना अघि सम्पन्न भए रथ यात्रा गराउने
पोखरा, ११ भदौं
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य निर्धारित मिति भन्दा ६ महिना अघि सके निर्माण कम्पिनीलाई रथ यात्रा गराउने उद्घोष गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईले बुधबार निर्माणधिन पोखरा विमानस्थलको अवलोकन गरेका थिए । उनले निर्माण कम्पनीलाई निर्धारित मिति भन्दा अघि निर्माण गर्न आग्रह गर्दै ६ महिना अघि निर्माण सकेको खण्डमा पोखरामा रथ यात्रा गराउने उद्घोष गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशकै पर्यटनको विकासमा उक्त विमानस्थल महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माण भएसंगै यस क्षेत्रको पर्यटनमा थप बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पोखरा विमानस्थल करिब २२ अर्वको लगानीमा सन् २०२१ जुलाइ १० भित्र सकिने गरी चाईनिज कम्पनी सि.ए.एम.सी. ले निर्माणको जिम्मा लिएको होे । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत सम्पन्न भएको चाईनिज सि.ए.एम.सी. कम्पनिका जनसम्पर्क अधिकृत कृष्ण प्रसाद चापागाईले बताए ।